Ihowuliseyili ezilahlwayo ubuso imaski mveliso kunye nomenzi | JBH yezoNyango
Izinto zokucoca imask
Ubume bemaski ye-gauze inokubambelela okungalunganga ebusweni bomntu. Amasuntswana amancinci amaninzi anobungozi kakhulu kuthi aya kungena kwimiphunga ngokusebenzisa umsantsa ophakathi kwemaski nobuso. Izinto zokucoca ulwelo ngokubanzi lilaphu lomatshini. Ekuphela kwendlela yokufezekisa ukusebenza okuphezulu kokuthintela uthuli kukonyusa ubukhulu, kwaye isiphumo esibi sokwandisa ubukhulu kukwenza ukuba umsebenzisi azive ukuba uxhathiso lokuphefumla lukhulu kwaye alonwabisi. Ilaphu elinyangiweyo elingelolombane alinakuthintela kuphela amasuntswana othuli, kodwa kunye ne-electrostatic charge ehambelana nomphezulu wayo inokufunxa uthuli oluhle ngokutsala kwe-electrostatic, ifezekise ukusebenza ngempumelelo kothuli oluphezulu. Ubungqingqwa bezinto zokucoca zinqabile kakhulu, nto leyo inciphisa kakhulu ukuxhomekeka komphefumlo womsebenzisi kwaye uzive ukhululekile, ngaloo ndlela kufezekiswa iimeko ezintathu ezifanelekileyo zento yokuhlunga elungileyo esichaze ngayo ngaphambili. Ngezixhobo ezilungileyo zecebo lokucoca ulwelo kunye nolwakhiwo lwemaski eyilwe ngokwenzululwazi, imaski esebenzayo kunye nomgangatho ophezulu uyenziwa.
Uyilo lokuchasana nelicala lokuthintela imaski kukuthintela umoya ukuba ungadluli kwisithuba esiphakathi kwemaski kunye nobuso bomntu ngaphandle kokufunxwa ngesihluzi. Umoya ufana nokuhamba kwamanzi, apho ukuxhathisa kuncinci, kuhamba kuqala. Xa imo yemaski ingekho kufutshane nobuso bomntu, izinto eziyingozi emoyeni ziya kuvuza zixingene kwaye zingene kwindawo yokuphefumla yomntu. Ke, nokuba ukhetha imaski ngesixhobo sokucoca ulwelo. Kananjalo ayinakukhusela impilo yakho. Imigaqo kunye nemigangatho yamanye amazwe ichaza ukuba abasebenzi kufuneka bavavanye rhoqo ubunzima beemaski. Injongo kukuqinisekisa ukuba abasebenzi bakhetha iimaski ezinobungakanani obufanelekileyo kwaye banxibe iimaski kumanqanaba afanelekileyo.
Ngale ndlela, abasebenzi baya kukulungela ukunyanzela ukuba banxitywe emsebenzini kwaye baphucule ukusebenza kwabo ngokukuko. Iimaski ezingenasondlo kumazwe angaphandle azidingi kucocwa okanye kutshintshwe ezinye. Xa isithintelo sethuli sigcwele okanye imaski yonakele, iya kulahlwa. Oku akuqinisekisi kuphela ucoceko lwemaski, kodwa kugcina abasebenzi ixesha kunye namandla okugcina imaski. Ngapha koko, iimaski ezininzi zamkela imilo e-arched, engenakuqinisekisa kuphela ukulunga kakuhle nobume bobuso, kodwa ikwagcina indawo ethile emlonyeni nasempumlweni, ekulungeleyo ukuyinxiba.
Okulandelayo: Ukuhanjiswa okunyanzelekileyo kwesigulana ukuhambisa umlenze wokukhubazeka
Izinto ezikhuselayo zobuso
imaski yobuso yokugula
iimaski zobuso zonyango
iimaski ezilahlwayo, ibhedi ehlengahlengiswayo kwizigulana, ophakamisa isigulana ngombane, ukhuko lwezonyango oluhlengahlengiswayo, ophakamisa isigulana ngesanti kubunzulu baphantsi, iimaski zobuso zonyango,
ibhedi ehlengahlengiswayo kwizigulana, iimaski ezilahlwayo, ophakamisa isigulana ngesanti kubunzulu baphantsi, ophakamisa isigulana ngombane, iimaski zobuso zonyango, ukhuko lwezonyango oluhlengahlengiswayo,